अन्जु कुस्मीले को सँग गरिन् विवाह? – Tharuwan.com
अन्जु कस्मी अहिले चलेका थारु गायिका एवं मोडेल हुन्। राज कुस्मीको अनस्क्रिन जोडीकोरुपमा प्रख्यात यी मोडलले आज आफ्नै वैवाहिक जीवनको सफलताको कामना गर्दै स्टाटस लेखिन्। त्यतिमात्र होइन, हनिमुन मनाउन आजै अमेरिका प्रस्थान गर्दैगरेको खुलासा पनि गरिन्।
यस्तो स्टाटस देखेर सबैले ‘अप्रिल फुल’ भन्दै कमेन्ट लेखेका छन्। तर यी गायिका एवं मोडेलले दाबीसाथ साँच्चिकै विहेको गरेको अडान कमेन्टमा राखेकी छन्। फुलकुमारी गीतबाट चर्चा कमाएका अन्जु कुस्मीले तिनै जोडी राज कुस्मीसँग विवाह गरेकी हुन् त?
हालै सम्पन्न विन्दास अवार्डमा पनि राज कुस्मी र अन्जु कुस्मीको जोडीले बेस्ट जोडीको अवार्ड जितेको थियो। यी दुईले फुलकुमारीसँगै धेरे म्युजिक भिडियो अनस्क्रिन रोमान्स गरेका छन्।
तपाइँलाई के लाग्छ अन्जु कुस्मीले साँच्चिकै विवाह गरेकी हुन् वा मान्छेहरुलाई मुर्गा बनाएका हुन्?